ShweMinThar: December 2007
1.The Four Reliances
2.We are what we think. All that we are arises with our thoughts. With our thoughts, we make our world.
3.Let us rise up and be thankful, for if we didn't learnalot today, at least we learnedalittle, and if we didn't learnalittle, at least we didn't get sick, and if we got sick, at least we didn't die; so, let us all be thankful.
4.Anger will never disappear so long as thoughts of resentment are cherished in the mind. Anger will disappear just as soon as thoughts of resentment are forgotten.
5.On life's journey Faith is nourishment,
အခုလို အေးတဲ့ရာသီကို ကူးပြောင်းကာစကာလမှာ ချမ်းသလိုလိုပူသလိုလိုနဲ့ နေရတာတစ်မျိုးပဲနော်။ မနက်စောစော သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချင်းလက်ဖက်ရည်သောက်မယ်လို့စိတ်ကူးမိတယ်။ နွေးနွေးထွေးထွေး လေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့။
ချင်းလက်ဖက်ရည် မွှေးမွှေးသောက်ကြစို့(ငါးယောက်စာ ငါးခွက်)
ပြင်ဆင်ချိန် - ၁၀မိနစ်မှ ၁၅မိနစ်
- ချင်းတက်ကြီးကြီး ၁၀ကျပ်သားလျော့လျော့
- ရေသန့် ဖန်ခွက် ၁ခွက်
- ရေနွေးဆူဆူ ဖန်ခွက် ၄ခွက်စာ
- Tea bag ၄ထုပ် သို့မဟုတ် အချိုခြောက်လက်ဖက်ရည် ၄ဇွန်းစာ
- နို့ဆီ (မလိုင်အပြည့်)
၁။ ချင်းတက်ကို အခွံခွာပါ။ပြီးရင် ပါးပါးလှီးပြီးထားပါ။
၂။ ချင်းပါးပါးလှီးပြီးသားကို ဒယ်တစ်ခုမှာ ထည့်၊ ရေထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ်တင်ကာ ဆူလာအောင် အပူပေးပါ။ ဆူလာရင် မီးဖိုပေါ်ကနေချပြီး ၁၀မိနစ်လောက် ဒယ်ထဲဆက်ထားပြီးမှ အရည်စစ်ယူပါ။
၃။ လက်ဖက်ခြောက် (အချိုခြောက်)နဲ့ ရေနွေးကို ကရားအိုးတစ်လုံးမှာထည့်ပြီး မီးဖိုမှာတည်ပါ။ မီးပြင်းပြင်းနဲပ လက်ဖက်ခြောက်ကျအောင်နှပ်ပါ။ ကျပြီဆိုရင် မတ်ခွတ်ကြီးတစ်လုံးမှာ အရည်စစ်ယူပါ။၄င်းထဲကို နို့ဆီထည့်ပြီးအရသာ မြည်းပါ။ အကြိုက်ဖြစ်ရင် နှပ်ထားတဲ့ ချင်းရည်ထည့်ပါ။ မတ်ခွတ်ကြီးထဲက လက်ဖက်ရည်ကို အပေါ်မြင့်မြင့်မြှောက်ပြီး နောက်မတ်ခွက်တစ်ခွက်မှာ ဆွဲထည့်ရင် အမြှုပ်ထပြီး အရသာပိုထူးပါတယ်။အအေးခံပြီး သုံးဆောင်ရုံပါပဲ။
Posted by Alex Aung at 8:37 PM No comments:
To Power The Zero
"ငါ မရှိရင်" ဆိုတဲ့
ပြန်လည် ဆန်းစစ်ဖို့ လိုနေပြီ။
ဂန္တ၀င် စကား ဆိုကြငြားလည်း